IVivo Y83: ene «Notch», neMediaTek Helio P22 kunye nee-euro ezingama-200 | Iindaba zeGajethi
IVivo, enye yeenkampani ezaziwa kakhulu e-China isungula izixhobo ezitsha kwintengiso: Vivo Y83. Esi siginali, ukongeza ukubheja kwenye yeeprosesa ezintsha zeMediaTek, ikwabheja kuyilo ngeNotshi kunye nexabiso elifikelelekayo.
IVivo Y83 liqela elifuna ukoyisa ukungena okanye uluhlu oluphakathi lwecandelo lezemidlalo. smartphones. Ngoku, liqela elikhulu kwaye sinokuluhlela kudidi phabletIscreen sayo sinobungakanani be-diagonal ye-6,22 intshi kwaye sifikelela kwisisombululo se-HD + (1.520 x 720 pixels). Ngoku, iya kuyithathela ingqalelo loo nto IVivo ikhethe ukuba ibandakanye inotshi encinci ephezulu yepaneli; ngokuchanekileyo, asibhekiseli kwi «Notch».
Okwangoku, oku IVivo Y83 liqela eliya kuba nguvulindlela wento enye: iya kuba yeyokuqala efowuni ukubandakanya enye yeeprosesa zeMediaTek zamva: Helio P22, i-CPU eyi-8 engundoqo Inkqubo yokusebenza rhoqo kwe-2 GHz okwangoku akunakwenzeka ukukuxelela ukuba iziphatha njani, kodwa ayizukuthatha thuba lide kuvavanyo lokuqala.
Okwangoku, le processor yongezwa I-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Nangona kunjalo, njengakwiimowudi ezininzi ezihambayo ze-Android, kuyenzeka ukuba usebenzise amakhadi ememori anendawo ephezulu ye-256 GB. Nangona kunjalo, into uphawu lweAsia ebengayifuni kukubandakanya ikhamera engemva ene-sensor ezimbini: kule meko, ivula inzwa enye ngesisombululo se-13 se-megapixel, kunye nokudanyaza kwe-LED ngokudibeneyo kunye nokunikezela ngamathuba okurekhoda iividiyo kwi-HD epheleleyo umgangatho.
Ngokwenxalenye yayo, ikhamera yangaphambili ine-8 megapixel resolution eya kukunceda wenze uqobo Kwaye, ukuze uvule i-terminal ngokukhawuleza, uya kuba nayo ukuqaphela ubuso.
Ngokubhekisele kwinkqubo yokusebenza, Ukubheja kweVivo Y83 kwi-Android 8.1 nangona iphantsi kweFuntouch 4.0 ulwenziwo lobeko- kwimifanekiso eqhotyoshelweyo ungayijonga. Siza kukuxelela kwakhona ukuba ibhetri yayo ingumthamo we-3.260 we-milliamps kwaye singacinga ukuba ngekhe sibuyele kwitshaja imini yonke.
Okokugqibela, iVivo Y83 sisixhobo onokufumana kwiimpawu ezintathu ezahlukeneyo: bomvu, mnyama okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Nangona konke okona kulungileyo kuya kuba lixabiso lalo: Ama-euro angama-200 kwinqanaba lokutshintshiselana ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IVivo Y83: ene «Notch», neMediaTek Helio P22 kunye nee-euro ezingama-200
USony uyavuma ukuba isiphelo somjikelo wePlayStation 4 sele siza kufika